सैनिक युनिफर्म बेच्न खोज्दा अक्षयकुमार यसरी फसे » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सैनिक युनिफर्म बेच्न खोज्दा अक्षयकुमार यसरी फसे
बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:४१ मा प्रकाशित !
एजेन्सी । सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्दा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार कानूनी झमेलामा फसेका छन् । अक्षय र उनकी पत्नी ट्विंकलका नाममा प्रहरीले लिगल नोटिस पठाएको छ ।
केही दिनअगाडि अक्षयले ट्विटरमा आफूले फिल्म ‘रुस्तम’ मा लगाएको नेवी अफिसरको युनिर्फम लिलामी गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस लगत्तै उनले सामािजक सञ्जालमा बोलकबोल सुरु गरे । बढि मूल्य हाल्नेलाई युनिर्फम विक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने पैसा समाजसेवामा लगाउन उनको घोषणा थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा उनको यस्तो कार्यको आलोचना भएको थियो । उनले युनिर्फम विक्री गरेर सशस्त्र प्रहरी तथा शहिद भएका सैनिकका विधवाहरुको संवेदनामा खेलवाड गरेको आरोप लागेको थियो ।
ट्विंकलले पनि पनिको ट्विट रिसेयर गरेकी थिइन् जसलाई धेरैले आलोचना गरेका थिए । अब यही मामलामा अक्षय कुमारका दम्पत्तिलाईे लिगल नोटिस पठाइएको छ । यो लिगल नोटिस पठाउनेमा २१ जनाको नाम छ । जसमा ११ कार्यरत आर्मी अफिसर, १ आइएफएफ अधिकारी र सात रिटायर्ड अफिसर छन् । नोटिसमा अक्षयलाई युनिर्फमको लिलामी कार्य तुरुन्त रोक्न भन्दै अन्यथा कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिइएको छ ।
अक्षयले आह्वान गरेको बोलकबोलमा युनिर्फमलाई अढाई करोड भारुसम्मको मोल लागेको थियो । तर, सन्दीप अहलावत नामका एक आर्मी अफिसरले युनिर्फम लिलामी गरेरमा अक्षयलाई अदालतमा तान्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै ट्ंिकलले ट्विटरमा राम्रो उद्देश्यका लागि काम गर्न लाग्दा आइपर्ने विरोधलाई सामना गर्ने बताएकी थिइन् ।
PREVIOUS POST Previous post: स्टेफन हकिङ्गको अन्तिम अनुसन्धान पेपर प्रकाशितः के छ यसमा ?
NEXT POST Next post: डोल्पा त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका दुई वडालाई पुर्ण खोप घोषणा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:४१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:४१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:४१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:४१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:४१